Google wuxuu rabaa inuu u wareejiyo codsiyada macruufka ah Android | Wararka IPhone
Google wuxuu bilaabay qalab si loogu wareejiyo codsiyada Android illaa iOS
Codsiyada aad ayey muhiim ugu yihiin aaladaha elektiroonigga maanta. Waxa muddo dheer loo yiqiinay "barnaamijyadu" ayaa kamid ahaa sababaha keenay in qalab qalabkiisu liito (sida kamarada iyo cilladaha kale) ay noqotay halbeegga casriga casriga. Kaydka macruufka ee loo yaqaan "iOS App Store" wuxuu yimid sanadkii 2008 ilaa bilowgii waxaan bilawnay inaan fahano inay jiraan siyaabo kala duwan oo ka wanaagsan oo wax loo qabto. Horumariyayaashu waxay yiraahdaan way kafiican tahay barnaamijka barnaamijka IOS, kumana dhahaan kaliya faa iidooyinka, sidaas Google waa inuu dhaqaajiyaa calaamadda.
Shirkada weyn ee matoorka raadinta ayaa soo bandhigtay a qalab taas oo u oggolaanaysa horumariyeyaasha ku qor Java oo dhoofinta shaqada si deg deg ah ugu codsiyada iOS. Laakiin khalad ha ka dhigin, qalabkan looma isticmaalo in lagu adeegsado barnaamijyada Android ee qalabka iOS, laakiin, sida ugu fiican, waxay u adeegi doontaa in laga abuuro barnaamijyo macruufka ah oo macruuf ah shaqadii ay horeyba ugu qabteen barnaamijka moobiilka Google.
Google's J2ObjC wuxuu u gudbin doonaa Java code-ka iOS
Qalabka ayaa loo yaqaan J2ObjC oo waxay u oggolaan lahayd horumariyeyaasha inay u beddelaan lambarka Java-ka macruufka 'iOS Objective-C source code', oo loo isticmaali karo in lagu dhiso barnaamijka iOS. Iyada oo tan, ka binaries iyo sawirka codsiyada way sii jiri doonaan, sidaa darteed horumariyeyaashu waxay horeyba u lahaan lahaayeen shaqo badan oo la qabtay, tii ay ku sameeyeen barnaamijka Android. Aragtida waa hagaagsan tahay, laakiin waa la arki doonaa haddii horumariyayaashu ay ku dhacaan arrimo u dhigma oo u keenaya iyaga inay isha ku hayaan barnaamij aysan fileynin inay sii wadaan, iyada oo aan loo sheegin arrinta kala-jajabinta ee in badan oo ka mid ah horumariyeyaasha Android ay ka cabanayaan . Su’aashu waxay tahay: Tani ma weerar ba’an oo lagu hayaa luuqadda barnaamijyada? Swift?
Microsoft sidoo kale waxay qorsheyneysay inay soo bandhigto qalab la mid ah Google ee J2ObjC, laakiin wuxuu ku dhammaaday dib u dhigista (iyo laga yaabee inuu ka tago) mashruuca sababo la xiriira dhibaatooyin soo food saaray horumarintiisa. Mashruuca Microsoft wuxuu ahaa in barnaamijyada macruufka ah lagu wareejiyo Windows Phone. Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadii Apple ay aragto in tani ay tahay khatar nooc ka mid ah, waxay qaadi doontaa talaabo. Waan arki doonaa halka ay waxaas oo dhami ku yaalliin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Google wuxuu bilaabay qalab si loogu wareejiyo codsiyada Android illaa iOS
Microsoft dib uma dhigin aaladdeeda (Islanwood) si loogu wareejiyo barnaamijyada iOS ee Windows, midka ay dib u dhigtay waa Android (Astoria)
Instagram waxay bilaabaysaa inay hirgeliso xisaab fara badan oo ku saabsan IOS